Maxaa ka jira in lagu takri falay deeq waxbarasho milateri Turkiga laga helay? – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Maxaa ka jira in lagu takri falay deeq waxbarasho milateri Turkiga laga helay?
Mareeg.com: Bilowgii bishaan dhamaadka ah ee July 2014 waxaa maalmo xiriir ah laga baahiyey “Radio Muqdisho Codka Ciidamada Qalabka Sida” wargelin ku saabsan deeq waxbrasho oo dalka Turkiga loo aadayo.
Deeqda Waxbarasho oo ah mid Jaamacadeed oo milateri ah ayaa waxaa ardayda heysta Shahaadooyinka Dugsiga Sare iyo Jaamacadaha loogu baaqay iney soo codsadaan.
Waxaa ogeysiiska lagu sheegay in qabashada Shahaadooyinku socon doonto min 12-ka ilaa 19-ka July. Lama sheegin tirada ardayda la qaadanayo.
Wargelintaas waxaa ka jawaabay dhallinyaro badan oo arday ah, kuwaasoo buux dhaafiyey xarrunta ciidamada badda ee degmada C/caziiz, halkaasoo aheyd goobta ogeysiiska lagu sheegay in la geysto codsiyada.
Haddaba, maxaa dhacay?, waxaa soo baxay shuruudo aan ogeysiiska lagu sheegin, oo ay ugu weyntahay lacaga aan yareyn oo la weydiistay ardayda codsiyada geystay, taasoo gaareya ilaa $2000 (Labo Kun oo Dollar).
Mid ka mid ah ardayda halkaas codsiyada geystay oo u warramay Mareeg Media ayaa sheegay in la kulmeen arrin lama filaan ah, kadib markii ay tageen xarrunta codsiyada la geynayey.
“Markii aan shahaadada dugsiga sare geystay waxaa la ii sheegay iney qasab tahay inaan tago wasaaradda Waxbarashada oo aan soo qaato shahaadada ay bixiso wasaaraddaas, markii aan soo baxayey ayaa waxaa iga soo daba istaagay nin sarkaal ah, kaasoo igu yiri ‘Deeqaan laguma helayo lacag la’aan ee ma heysataa lacag gaareysa $2000?” ayuu yiri Da’ud oo ah arday ku hungoobay damacii uu ka lahaa inuu ka qeybgalo tartranka loo gelayo deeqda Waxbarasho ee Turkiga.
Arrintaan ayaa niyad jab ku noqotay arday badan oo doonayey iney ku biiraan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya, maadaama aysan helin Karin lacagta shardiga laga dhigay.
Mareeg Media ma xaqiijin karto in arrintaas ay ka warhayaan madaxda wasaaradda Gaashaandhiga Soomaaliya, taasoo mas’uul ka ah howlaha ciidamada dalka, hase ahaatee shabakaddan ayaa sanadkii hore ogaatay in deeq nuucaan ah oo isla dalka Turkiga loo aadayey ardayda laga qaadayey ilaa $1500 dollar.
Maxwey dowladda Soomaaliya qabatay todobaadkii tegay?
Sarkaal ka tirsanaa jiray Alshabaab oo lagu dilay Muqdisho